Ciloxan (ဆဲလ်လိုဆန်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Ciloxan (ဆဲလ်လိုဆန်း)
Ciloxan (ဆဲလ်လိုဆန်း) ကဘာလဲ။
Generic Name: Ciloxan (ဆဲလ်လိုဆန်း) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Ciloxan (ဆဲလ်လိုဆန်း) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Ciloxan® ကို အောက်ပါ မျက်စိနှင့် နားရောဂါများ ကုသရန် အသုံးပြုပါသည်။
မျက်လုံးတွင် ဘတ်တီးရီးယားကူးစက်ခြင်း ( မျက်ခွံ အတွင်းသား ရောင်ရမ်းခြင်း)
မျက်ခွံတွင် ဘတ်တီးရီးယား ကူးစက်ခြင်း ( မျက်ခွံ ရောင်ခြင်း)
မျက်လုံး အရှေ့ပိုင်းတွင် အနာဖြစ်ခြင်း ( မျက်ကြည် လွှာ အနာ)
Ciloxan® ကို အခြားနေရာများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင် သည်။ ပိုမိုသော အချက်အလက်များအတွက် ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူအား မေးမြန်းပါ။
Ciloxan (ဆဲလ်လိုဆန်း) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
စိုစွတ်မှုများ မကျန်အောင် မျက်လုံးကို သန့်ရှင်းသော တစ်ရှူးဖြင့် သုတ်ပါ။
ဦးခေါင်းကို နောက်သို့ မော့ပါ။
အောက် မျက်ခွံကို ညင်သာစွာ ဆွဲ၍ အပေါ်ကို ကြည့်ပါ။
ဆေးပုလင်းကို မျက်လုံးအပေါ်တွင်ထားပြီး အောက်မျက်ခွံ၏ အတွင်းပိုင်းထဲသို့ ဆေး တစ်စက်ကို ညင်သာစွာ ညစ်ချပါ။ ဆေးပုလင်း နှင့် မျက်လုံး သို့မဟုတ် မျက်တောင်မွှေး နှင့် မထိအောင် ဂရုစိုက်ပါ။
မျက်လုံး မျက်နှာပြင်တွင် ဆေးရည်များ ပြန့်သွား အောင် မျက်လုံးကို ပိတ်ချီ ဖွင့်ချီ လုပ်ပါ။
ပိုလျှံသော အရည်များကို သန့်စင်သော တစ်ရှူးဖြင့် သုတ်ပစ်ပါ။
ဆေးပုလင်း၏ ထိပ်ကို သင့်လက်ချောင်းဖြင့် မထိမိ စေရန် ဂရုစိုက်ပါ။ အစက်ချပြွန်သည် ပုလင်းဖြင့် တစ်ဆက်တည်း မဟုတ်ပါက အခြားမျက်နှပြင်ပေါ် တွင် မချပါနှင့်။
အသုံးမပြုမီ ဆေးပုလင်းကို ကောင်းစွာ လှုပ်ပါ။
အဖုံးဖွင့်ပြီးသောအခါ tamper evident snap collar ပျက်နေပါက အသုံးမပြုဘဲ လွတ်ပစ်ပါ။
အသုံးပြုသူသည် ဆေးပုလင်းကို မသုံးမီ လက်ဖဝါး ထဲတွင် မိနစ် အနည်းငယ်ကိုင်ထားပြီး နွေးအောင် လုပ်ပါ။ နားနှင့် ထိသော အခါ အေးမနေစေရန် ဖြစ်သည်။
ခေါင်းကို စောင်းပြီး ထိခိုက်သော နားအတွင်း အစက်များ တစ်စက်ချင်းချပါ။ ဆေးရည်သည် အပြင်ဘက် နား လမ်းကြောင်း ထဲသို့ စိမ့်ဝင် သွားနိုင်စေရန် ခေါင်းကို ၅ မိနစ်လောက် စောင်းထားပါ။ လိုအပ်ပါက တစ်ဖက်နားတွင် ထပ် လုပ်ပါ။
ဆေးပုလင်း နှုတ်ခမ်းနှင့် ဆေးရည် မညစ်ပတ် စေရန် နား၊ ပတ်ဝန်းကျင်နေရာ သို့မဟုတ် အခြား နေရာများနှင့် ဆေးပုလင်း နှုတ်ခမ်း မထိအောင် ဂရုပြုပါ။ အသုံးမပြုတော့ပါက ဆေးပုလင်းကို လုံအောင်ပိတ်ပါ။
လိမ်းဆေး အဖုံးကို ဖွင့်ပါ။
အောက် မျက်ခွံကို ညင်သာစွာ ဆွဲ၍ အပေါ်သို့ ကြည့်ပါ။
ဆေးပုလင်းကို မျက်လုံး အပေါ်တွင် ကိုင်ပြီး အောက် မျက်ခွံ အတွင်းသို့ လိမ်းဆေး 1cm line ဝင်အောင် ညင်သာစွာ ညစ်ပါ။ ဆေးပုလင်း ထိပ်နှင့် မျက်လုံး သို့မဟုတ် မျက်တောင်မွေး မထိအောင် ဂရုစိုက်ပါ။
မျက်လုံး မျက်နှာပြင်တွင် လိမ်းဆေးများ ပြန့်သွား အောင် မျက်လုံးကို ပိတ်ချီ ဖွင့်ချီ လုပ်ပါ။
မျက်လုံးဖွင့်သောအခါ အမြင်များ ဝါးနေနိုင်သည်။ မျက်လုံးကို မပွတ်ပါနှင့်။ မျက်လုံးကို ပိတ်ချီ ဖွင့်ချီ ဆက်လုပ်နေပါက ခဏအတွင်း အမြင်ဝါးခြင်း ပျောက်သွားပါလိမ့်မည်။
ပိုလျှံသွားသော လိမ်းဆေးများကို သန့်စင်သော တစ်ရှူးဖြင့် သုတ်ပါ။
ဆေးပုလင်း၏ ထိပ်ကို လက်ဖြင့် မထိစေရန် ဂရု စိုက်ပါ။
Ciloxan® ဘယ်လိုသုံးရသည်ကို မေးလိုပါက ဆရာဝန်အား မေးမြန်းပါ။
Ciloxan (ဆဲလ်လိုဆန်း) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Ciloxan® ကို ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိုလှောင်ခြင်း သည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဆေးမပျက်စီးစေရန် ဆေးကို ခဲအောင် မလုပ်ပါနှင့်။ Ciloxan® တွင် မတူညီသော ကုန်တံဆိပ်များစွာရှိသည်။ တံဆိပ်ပေါ် မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းမှုပုံစံ ကွဲပြားနိုင်သည်။
ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိဘဲ Ciloxan® ကို အိမ်သာထဲ ထည့်ခြင်း၊ ရေဆင်းပိုက်ထဲ ထည့်ခြင်း မပြုပါနှင့်။ သက်တမ်းကုန်သွားပါက သို့မဟုတ် မလိုအပ်တော့ပါက ထိုထုတ်ကုန်ကို သင့်တော်စွာ စွန့်ပစ်ရန် အရေးကြီးသည်။ ထုတ်ကုန်ကို ဘေးကင်းစွာ စွန့်ပစ်နိုင်ရန် ဆေးဝါး ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။
Ciloxan (ဆဲလ်လိုဆန်း) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Ciloxan® သို့မဟုတ် အခြားဆေးများတွင် ပါဝင်သော ပစ္စည်းများနှင့် ဓါတ်မတည့်ပါက။
အစားအစာများ၊ ဆိုးဆေးများ၊ တိရစ္ဆာန်များ စသည်ဖြင့် ဓါတ်မတည့်မှုများ ရှိပါက
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Ciloxan (ဆဲလ်လိုဆန်း) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
အမျိုးသမီးများ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် သို့မဟုတ် နို့တိုက်စဉ်တွင် Ciloxan® သုံးလျှင်ရနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ပြည့်စုံစွာ လေ့လာထားခြင်း မရှိပါ။ Ciloxan® မသောက်မီ ဖြစ်နိုင်သော အကျိုး ကျေးဇူးနှင့် အန္တရာယ်ကို ချိန်ညှိရန် ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။
Ciloxan® သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစား အသောက် နှင့် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့၏ သတ်မှတ်ချက် အရ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များတွင် ထိခိုက်နိုင်ချေအဆင့် C ရှိသည်။
ဆေးသည် မိခင်နို့ကို ဖြတ်သွားသလား မသိရှိပါ။ နို့တိုက် မိခင်များတွင် သတိထား၍ အသုံးပြုပါ။
သင်သည် ကိုယ်ဝန်ရှိပါက၊ ကလေးနို့တိုက်နေပါက ဤဆေး မသုံးမီ ဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်ပါ။
Ciloxan (ဆဲလ်လိုဆန်း) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
မျက်လုံး သက်တောင့်သက်သာ မရှိခြင်း ( ဥပမာ- မျက်လုံး စူး၍ နာခြင်း၊ ပူလောင်ခြင်း၊ ယားယံခြင်း)
မျက်လုံး မျက်နှာပြင်တွင် ဆေး၏ အဖြူရောင် အနယ်များ ကျခြင်း
ပါးစပ်တွင် ပုံမှန်မဟုတ်သော အရသာဖြစ်ခြင်း
ပြင်းထန်သော ဓါတ်မတည့်သည့် တုံ့ပြန်မှုများ ( အဖုအပိမ့်များ၊ အင်ပျဉ်၊ ယားကွက်များ၊ အသက်ရှူ ခက်ခြင်း၊ ရင်ဘတ် တင်းကျပ်ခြင်း၊ ပါးစပ်၊ မျက်နှာ၊ နှုတ်ခမ်း သို့မဟုတ် လျှာ ရောင်ရမ်းခြင်း)
ဘယ်ဆေးတွေက Ciloxan (ဆဲလ်လိုဆန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Ciloxan® သည် လက်ရှိသောက်နေသော အခြားဆေးများနှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဆေး တုံ့ပြန်မှုများ ကို ရှောင်ရန် သင်အသုံးပြုနေသော ဆေးများ အားလုံးကို စာရင်းပြုပြီး ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်အား ပြပါ။ ဘေးကင်း စေရန် ဆရာဝန် သဘောတူမှုမပါဘဲ ဆေးပမာဏ ကို ပြောင်းခြင်း၊ ရပ်ခြင်း၊ စတင်ခြင်း မပြုပါနှင့်။
Ciloxan® နှင့် အခြားဆေးများ အချင်းချင်း ဓါတ်ပြုမှု အချို့မှာ-
Ciloxan® သည် Theophylline ၏ သွေးရည် ကြည်တွင်းရှိ ပမာဏကို မြင့်တက်စေသည်။
Ciloxan® သည် caffeine ၏ ဇီဝကမ္မ ဖြစ်စဉ်ကို နှောင့်ယှက်နိုင်သည်။
Ciloxan® သည် သွေးမခဲဆေး သောက်ဆေး ဖြစ်သော warfarin နှင့် မျိုးတူဆေးများ၏ အစွမ်းကို ပိုမြင့်စေသည်။
Ciloxan® သည် cyclosporine ပါသောက်နေရ သော လူနာများတွင် သွေးရည်ကြည်တွင်းရှိ creatinine ပမာဏကို ယာယီမြင့်တက်စေသည်။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Ciloxan (ဆဲလ်လိုဆန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Ciloxan® သည် အစာ သို့မဟုတ် အရက် နှင့် ဓါတ်ပြုနိုင်ပြီး ဆေး၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြောင်းလဲစေ သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်နိုင်ချေကို မြင့်စေသည်။ ဆေးမသောက်မီ အစာ သို့မဟုတ် အရက်နှင့် ဓါတ်ပြုခြင်း ဖြစ်နိုင်သလားကို ဆရာဝန်၊ ဆေးဝါးပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Ciloxan (ဆဲလ်လိုဆန်း) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Ciloxan® သည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေ အနေများနှင့် အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ထိုသက်ရောက်မှုသည် သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပိုဆိုးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဆေး၏အလုပ်လုပ်ပုံ ပြောင်းသွားခြင်း ကိုဖြစ်စေနိုင် သည်။ သင့်တွင် လက်ရှိ ရှိနေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ အားလုံးကို ဆရာဝန်နှင့် ဆေးဝါးပညာရှင်အား အသိပေးထား ရန် အရေးကြီးသည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Ciloxan (ဆဲလ်လိုဆန်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
မျက်လုံး သို့မဟုတ် မျက်ခွံ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း
မျက်စဉ်းကို နေ့ဘက်တွင်သာ သုံးသင့်သည်။
တစ်နေ့ လေးကြိမ် ထိခိုက်သော မျက်လုံးထဲသို့ တစ်စက် နှစ်စက် ထည့်ပေးပါ။
ရောဂါပိုးကူးစက်မှု ပြင်းထန်ပါက အစ နှစ်ရက်တွင် မအိပ်သော အချိန်တိုင်း နှစ်နာရီတစ်ခါ တစ်စက် နှစ်စက် ထည့်ပေးပါ။ ထို့နောက် ကျန်ရှိသော နေ့များတွင် တစ်နေ့ လေးကြိမ် သာ သုံးပါ။
မျက်စဉ်းကို အောက်ပါအတိုင်း နေ့ရော ညပါ သုံးပါ။
ပထမနေ့တွင် ပထမ ၆ နာရီ အတွင်း ၁၅ မိနစ် တစ်ခါ ထိခိုက်သော မျက်လုံးထဲသို့ နှစ်စက် ထည့်ပါ။ ထို့နောက် ကျန်ရှိသော အချိန်များတွင် မိနစ် ၃၀ တစ်ခါ ထိခိုက်သော မျက်လုံးထဲသို့ နှစ်စက် ထည့်ပါ။
ဒုတိယနေ့တွင် ထိခိုက်သော မျက်လုံးထဲသို့ တစ်နာရီ တစ်ခါ နှစ်စက်ထည့်ပါ။
တတိယနေ့မှ ၁၄ရက်မြောက်နေ့အထိ ထိခိုက် သော မျက်လုံးထဲသို့ ၄ နာရီတစ်ခါ နှစ်စက် ထည့်ပါ။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် နားလမ်းကြောင်းထဲ သို့ Ciloxan® ၄ စက် တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် ထည့်ပါ။
Otowick သုံးရန် လိုသော လူနာများတွင် ဆေး ပမာဏကို ပထမအကြိမ်သုံးခြင်းတွင် နှစ်ဆ လုပ် နိုင်သည်။
Ciloxan® မျက်စိ လိမ်းဆေး
လိမ်းဆေးကို နေ့ဘက်တွင်သာ သုံးသင့်သည်။
ထိခိုက်သော မျက်လုံးတွင် တစ်နေ့ သုံးကြိမ်ဖြင့် နှစ်ရက် သုံးသင့်သည်။ ထို့နောက် နောက် ၅ရက် တွင် တစ်နေ့ ၂ကြိမ် သုံးပါ။
လိမ်းဆေးကို အောက်ပါအတိုင်း နေ့ရော ညပါ သုံးပါ။
လိမ်းဆေးကို ပထမ နှစ်ရက်တွင် ထိခိုက်သော မျက်လုံးကို တစ်နာရီမှ နှစ်နာရီကြာတိုင်း တစ်ကြိမ် စီ လိမ်းပါ။ ထို့နောက် နောက်ထပ် ၁၂ ရက်တွင် လေး နာရီခြား တစ်ခါ လိမ်းပါ။
ကလေးတွေအတွက် Ciloxan (ဆဲလ်လိုဆန်း) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ကလေးများအတွက် နားလမ်းကြောင်းထဲသို့ Ciloxan® ၃ စက် တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်။
အသက် ၁နှစ်အောက် ကလေးများတွင် ဘေးကင်း မှုနှင့် အစွမ်းထက်မှုကို သေချာ မသိရှိပါ။
Ciloxan (ဆဲလ်လိုဆန်း) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Ciloxan® ကို အောက်ပါ ပုံစံ၊ ပြင်းအား များဖြင့် ရနိုင်ပါ သည်။
Ciloxan® မျက်စိ/ နားဆေးရည်။ 0.3% ciprofloxacin
Ciloxan® မျက်စိ လိမ်းဆေး။ 0.3% ciprofloxacin
Ciloxan® သောက်ရန် မေ့သွားပါက တတ်နိုင် သလောက် မြန်မြန်ပြန် သောက်ပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ် သောက်ရန် အချိန်ရောက်သွားပါက မေ့သွားသော အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ဆက်သောက်ပါ။ နှစ်ကြိမ် ထပ်မသောက်ပါနှင့်။